iOS 6.1.2 firmware for iPhone/Pad/Pod touch – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Fri, Feb 22nd, 2013 iOS application များ / iOS firmware များ | By သက်နိုင်စိုး iOS 6.1.2 firmware for iPhone/Pad/Pod touch
Apple က iOS 6.1.2 update အသစ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ ။ iPhone 5, iPhone 4S , iPhone4, iPhone 3GS , iPad Mini , iPad3, iPad4, iPad2, iPod touch 4th generation နဲ့ iPod touch 5th generation တို့ကို iOS 6.1.2 သို့ update လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ iDevices များထဲမှ iOS 6.1.2 သို့ တိုက်ရိုက် update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Setting > General > Software Update ထဲကိုဝင်ပြီး iOS 6.1 ကို update ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
iOS 6.1.2 firmware များကို ကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့် direct download ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က link များမှာ မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ device အလိုက် download ရယူနိင်ပါတယ်။
29 comments on “iOS 6.1.2 firmware for iPhone/Pad/Pod touch”	Tint Naing on February 24, 2013 at 8:04 am said:
Hello Ko Thet Naing Soe,First of all,I really appreciate and thank for your guiding and sharing for us.Can you please write and share for us about how to upgrade the jailbroken Iphone4s(with Evasion) IOS version 6.1 to latest 6.1.2 using IPSW file safely.And jailbroken process after upgrading to IOS 6.1.2.I am really worried that i will get the error if the steps goes wrong while updating jailbroken iphone.I donot wish to upgrade via the idevice and i prefer to upgrade using itunes and ipsw file for latest ios 6.1.2.I have been dowloaded the IPSW files for IOS 6.1.2 (10B146_restore.ipsw (920MB).My current IOS is 6.1 and using Evasion for jailbreak process.Thanks for your help and i am looking forward your reply
Reply ↓	Oo Guna on February 25, 2013 at 12:46 pm said:
Software Update ကို ဝင်ရှာတာ 6.1.2 ကို တက်လာတာမတွေ့ရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတာပြောပြပါဦးနော။
Reply ↓	shwemyo on February 28, 2013 at 1:59 am said:
6.0 ဆိုရင်တက်လာပါတယ် update လုပ်ချိန် 1 နာရီလောက်ပဲကြာတယ် 6.1 ကိုမြင့်ထားရင်တက်မလာပါဘူးဘာကြောင့်ဆိုတာမသိပါ
Reply ↓	Htoo Htoo Aung on February 25, 2013 at 1:52 pm said:
ကျွန်တော် mini 6.0.2 လေးက Jail break လုပ်ပီးသားဗျ 6.1.2 ကို ကျွန်တော့ mini ကနေတိုက်ရိုက် update လုပ်လိုက်ရင် ဘာပျက်သွားမှာလဲ
Reply ↓	min min on February 26, 2013 at 8:30 am said:
Jail break လုပ်ထားတာတွေပျက်သွားပါလ်ိမ့်မယ်
Reply ↓	Htoo Htoo Aung on March 9, 2013 at 4:32 am said:
ဲJail Break ပြန်ဖြူတ်ပီး 6.1.2 တင်ရင်ရော ဘယ်လို့လုပ်ရလဲ သိပါရစေခင်ဗျာ
Reply ↓	naylinoo on February 27, 2013 at 10:56 am said:
IDM နဲ့ဒေါင်းလို့မရဘူး ကယ်ပါအုန်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ link ကူးတော့လည်း Idm ကရပ်လို့မရဘူးအစကနေပြန်ဒေါင်းနေတယ်
Reply ↓	Gasper on March 1, 2013 at 11:59 am said:
ကျွန်တော့်ဖုန်းက ပထမ 6.1 ကို jailbreak လုပ်ပြီးသားပါ
6.1.2 ထပ်မြှင့်မယ်ဆို unjailbreak လြုပ်စရာလိုမလိုသိချင်လို့ပါ
Reply ↓	Khunalni on March 5, 2013 at 3:14 pm said:
lote ya mar
Reply ↓	ko Aung on March 9, 2013 at 11:23 am said:
bal lo load ya ma la`
Reply ↓	ုkyaw on March 1, 2013 at 2:36 pm said:
ios 6.1.2 Jail break လုပ်ပြီးပြီ မြန်မာ font ဘယ်လိုသွင်းရမလဲ ဒီကအကိုတို့မှအမတို့ ကူညီပါအုံး
Reply ↓	Khunalni on March 5, 2013 at 3:16 pm said:
MM keyboard6, zawgyi 4.3
Reply ↓	Khin on March 2, 2013 at 2:16 am said:
ဖုန်းရဲ့settingထဲကနေupdate လုပ်ရင်back upလုပ်ထားရအုန်းမလာuးpdateလုပ်ရင်ဘာတွေပျက်တတ်လဲ
Reply ↓	Khunalni on March 5, 2013 at 3:13 pm said:
Reply ↓	သူရိန် on March 5, 2013 at 4:40 pm said:
Reply ↓	Ravvit on March 8, 2013 at 7:42 am said:
kya naw phone A4 version 6.0(10A403)
Serial Number 860498E3A4T
lock phone lar unlock phone lar ti chin lo par ..
version upgrade loat chin lo lock so yin ma ya bu pyaw kya lo par
Ku nyi par own
Reply ↓	ko Aung on March 9, 2013 at 11:22 am said:
jailbreak လုပ်ပီးသား ကျနော့ဖုန်းကို ဗာရှင်းမြှင့် ချင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲးပြောပြပေးကြပါခင်ဗျာ
လက်ရှိဗာရှင်းက 6.1 ပါ
Reply ↓	ကျော်လင်း on March 10, 2013 at 4:46 am said:
plz help ကျွန်တော့် iphone 4s က battery 20 လောက်ဆိုရင် ဖုန်းဝင်လာတာနဲ့ auto shutdown ဖြစ်သွားတယ် တကယ်လို့ အသံကို အဆုံးထိလျော့လိုက်ရင်တော့ auto shutdown မဖြစ်တော့ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနော် ကူညီပါအုန်း hard reset လည်းချပြီးသွားပါပြီ
Reply ↓	ezuko on March 12, 2013 at 5:01 am said:
please help me to downgrade ios 6.1.2 to 6.1.
can anybody tell me how to make it ?
Reply ↓	koardan on March 12, 2013 at 2:37 pm said:
ကျနော့် ipad2(wifi) passcoad မေ့သွားလို့။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာ။
Reply ↓	yeyint on March 15, 2013 at 9:03 am said:
ကျွန်တော်သိချင်တာကios 5.1.1 ကိုituneမှာ manual လမ်းကြောင်းပေးပြီuးpdateလုပ်တာအဆင်မပြေပါituneကလဲနောက်ဆုံးထွက်version 11.0.2 ပါ step by step လေးရှင်းပြပါ။
Reply ↓	yeyint on March 15, 2013 at 9:13 am said:
ios jailbreak လုပ်နည်းလေးလဲတင်ပေးပါဗျာ။
Reply ↓	Ruth Phyu on May 13, 2013 at 6:36 pm said:
Reply ↓	nantawwinn on April 16, 2013 at 2:46 am said:
iphone5 iOS6.1.3 အတွက်ဂျေဘရိတ်လေးရရင်တင်ပေးပါဦးနော်
Reply ↓	Ruth Phyu on May 13, 2013 at 6:35 pm said:
Reply ↓	HsengMain on May 3, 2013 at 1:48 pm said:
ကျေးဇူးပြုပြီး Apple ID အကောင့်လေးလုပ်ပေးပါအုံး ဖေ့ဘုတ် ကသုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ တရုတ်လိုင်းနဲ့ဆိုတော့ ဖေ့ဘုတ်ကမသုံးနိုင် mediafire link ကမပွင့် အကောင့်ကလဲလုပ်ရခက်တယ် ဒါကြောင့် post လေးမှာဘဲ တင်ပြီး အကောင့်လေးတောင်းလိုက်တာပါ အကောင့်က US အကောင့်လုပ်ချင်လို့ပါ တစ်ကောင့်လောက်လုပ်ပေးပါအုံး ကူညီပေးမဲ့သူရှိရင် ကျွန်တော့် ကို Reply လေးလုပ်ပေးပါ ကျွန်တော့် အကောင့် ပေး မလို့ပါ
Reply ↓	Aye Lwin on May 13, 2013 at 4:19 am said:
Apple ID A/C password ပြောင်းချင်လိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ????
iOS 6.1.3 jailbreak ရရင်တင်ပေးပါအုံး
Reply ↓	Ruth Phyu on May 13, 2013 at 6:34 pm said:
Hein Htet on ဖုန်းဈေးနှုန်းများ ( Mobile Price)မိုးညိုသား on Android Multipurpose Toolkit version 1.0Zom Seng Khae on SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2)Zom Seng Khae on SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2)linx on Wondershare MobileGo for Android 3.2.0 For Pc 25.49 MB Android Development